ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်က GPA, SAT, ACT ရမှတ်မှာ Data
ကျောင်းသားများ & မိဘများအဘို့ စမ်းသပ်ခြင်း graph
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်က GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
01 ၏ 01
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်က GPA, SAT ရမှတ်များနှင့် ACT ရမှတ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Cappex ၏ဒေတာကို Courtesy
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကဖို့အားလုံးကိုလျှောက်ထား၏အဖြစ်အများအပြား 60 ရာခိုင်နှုန်းလက်ခံခဲ့သည်ရကြပါဘူး။ အောင်မြင်သောလျှောက်ထားပုံမှန်အားအဆင့်နှင့်သိသိသာသာပျမ်းမျှအားအထက်ဖြစ်ကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်ရမှတ်များရှိသည်။ သို့သော်ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကမျှမနိမ့်ဆုံး GPA သို့မဟုတ်ဝန်ခံချက်များအတွက် SAT / ACT လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကအများဆုံးလျှောက်ထားမှုအတွက် 2015 ခုနှစ်တွင်စမ်းသပ်-optional ကိုရေးမူဝါဒချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ သငျသညျသူတို့သည်သင်၏ပညာသင်နှစ်စွမ်းရည်ကိုထင်ဟပ်နှင့်သင့်လျှောက်လွှာပေါ်တွင်သင်၏မျက်နှာသာအတွက်အလေးချိန်နိုင်ပါတယ်ထင်လျှင်သင်သည်သင်၏ရမှတ်များတင်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျမိမိတို့အိမ်တွင်ပညာသင်ကြားကြသည်လျှင်သင်စမ်းသပ်မှုရမှတ်များတင်ပြရန်ရမယ်, အဆင့်ပေးသနားတဲ့စုဆောင်း NCAA ရတိုင်းကျွန်မအားကစားသမားများမှာဒါမှမဟုတ်အရှိန်ခုနစ်နှစ် BA ဘွဲ့ / MD အစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထားမယ့်အလယ်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။
2016 ၏ကျဆုံးခြင်းအတွက်စာရင်းသွင်းပထမဦးဆုံးအချိန်ကျောင်းသားများကို၏အလယ်တွင် 50 ရာခိုင်နှုန်းကဤရမှတ်များရှိခဲ့:
695 မှ 580: ဝေဖန်စာဖတ်ခြင်း SAT
700 မှ 600: သင်္ချာ SAT
SAT: 1310 1460 မှ
Composite Act: 27 32
အင်္ဂလိပ် Act: 27 34
ACT သင်္ချာ: 26 31
TOEFL: 98 108 မှ
သငျသညျဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကဘယ်လိုဖွင့်တိုင်းတာသလဲ? Cappex မှဤအခမဲ့ tool ကိုနဲ့ရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတွက်ချက်။
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်က GPA, SAT နှင့် ACT ဇယား
အထက်ပါဂရပ်များတွင်အပြာရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်အစက်ကိုလက်ခံကျောင်းသားများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အများစုမှာဝန်ခံခဲ့သည်ကျောင်းသားများကို 3.5 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့အထက်တန်းကျောင်း GPA, 1200 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားတစ်ဦး SAT ရမှတ်များနှင့် 26 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားတစ်ဦး ACT ပေါင်းစပ်ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစမ်းသပ်မှုရမှတ်များနှင့်အဆင့်သိသိသာသာတစ်ခုလက်ခံမှုစာတစ်စောင်ရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
အဆိုပါဂရပ်ရဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်နောက်ကွယ်မှဝှက်ထားသောအနီရောင်အစက်၏စည်း (ပယ်ချကျောင်းသားများကို) နှင့်အဝါရောင်အစက် (စောင့်နေစာရင်းထဲကကျောင်းသားများ) ရှိပါတယ်သတိပြုပါ။ ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်အလွန်အမင်းရွေးချယ်ဖြစ်တယ်, ဒါဝန်ခံချက်များအတွက်ပစ်မှတ်အပေါ်ကြ၏အဆင့်နှင့်စမ်းသပ်ရမှတ်များနှင့်အတူအချို့သောကျောင်းသားများကိုလက်ခံခဲ့ရဘူး။ အနည်းငယ်ကျောင်းသားများကိုနည်းနည်းစနစ်တစ်ခုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစမ်းသပ်မှုရမှတ်များနှင့်အဆင့်နှင့်အတူလက်ခံခဲ့သည်ခဲ့လည်းသတိပြုပါ။ GW လက်ခံသောကွောငျ့ဤသူကားအ ထိုအဖြစ်များသည့်လျှောက်လွှာ များနှင့်ရှိပြီး ဘက်စုံဝင်ခွင့်များ ။ ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားစကြာ သင့်ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းသင်တန်းများ၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကို , သင့် လျှောက်လွှာစာစီစာကုံး , သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများလှုပ်ရှားမှုများ နှင့် ထောက်ခံချက်များအက္ခရာများ ။ အဆိုပါဝင်ခွင့်များရှေးရှေးကိုလည်းသင်၏အဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးစေခြင်းငှါ ကောလိပ်အင်တာဗျူး နှင့်သင့် သရုပ်ပြအကျိုးစီးပွား ။
အများဆုံးရွေးချယ်တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူအတိုင်း, သင်တို့၏လျှောက်လွှာ၏အရေးအပါဆုံးအပိုင်းအစသင့်ရဲ့ပညာရေးစံချိန်ဖြစ်သွားသည်။ အဆင့်တစ်ခုတည်းသောအဆုံးအဖြတ်အချက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါဝင်ခွင့်များရှေးရှေးသင် AP, ခလရနှင့်ဂုဏ်ထူးသင်တန်းများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်စိန်ခေါ်တော့မြင်ချင်လိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်္ချာအတွက်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ထက်ပိုပြီးနှင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားရှိခြင်း application တစ်ခုခိုင်ခံ့စေမည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုအထက်သို့ထက်တစ်ဘက်တွင်ရှိသည်သောအဆင့်တစ်ဦးအပြုသဘောစှဲစေမည်။
retention ကိုနှင့်ကျောင်းဆင်းပွဲနှုန်းထားများ, ကုန်ကျစရိတ်, ငွေကြေးအကူအညီနှင့်လူကြိုက်များပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များအပါအဝင် GW အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့, ထုတ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကဝင်ခွင့်များပရိုဖိုင်း ။
ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှလျှောက်ထားကဲ့သို့သောရွေးချယ်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များမှဆွဲဆောင်ခံရဖို့လေ့ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် , Georgetown တက္ကသိုလ်မှ , ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ် နှင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ် ။ သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုစာရင်းထဲတွင်အချို့အများပြည်သူတက္ကသိုလ်များပါဝင်သည်ချင်ပါတယ်လျှင်, ကောလိပ် Park မှာမေရီလန်းတက္ကသိုလ် နှင့် ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်က ကြည့်ရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။
Hartford GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Sacramento ပြည်နယ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
မိုင်ယာမီ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
Ithaca ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Westmont ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အရှေ့ကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အတ္တလန္တိတ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏ကောလိပ်
နည်းပညာ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏နယူးယောက်ဌာန Institute
ဘယ်လို Mollusks ပုလဲ Make
Clark - အမည်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မူလအစ
Coxey ရဲ့ကြည်းတပ်: အလုပ်လက်မဲ့အလုပ်သမားများ၏ 1894 ခုနှစ်မတ်လ
ဘယ်လိုအများကြီးရေနှင့် / သို့မဟုတ်အလတ်စားငါ acrylic သုတ်ဆေးမှ Add နိုင်သလား?
ဂီတ၏ Element တွေကိုတစ်ခုနိဒါန်း
Hans Christian Andersen ကအတ္ထုပ္ပတ္တိ
Burundanga မူးယစ်ဆေးသတိပေးချက်: အဆိုပါအချက်အလက်
တစ်ဦးကပုံပြိုင်ပွဲပွုလုပျခွငျးရန်ဒိုင်ယာနာ Sadtler ရဲ့ Key ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ
Gamelan ၏သမိုင်း, အငျဒိုနီးရှား Music နဲ့အက
ဆရာကျေးဇူးတင်ကြောင်း: သင်သင့်ဆရာလိုအပ်7အကြောင်းရင်းများ
ကျူးဘားတော်လှန်ရေး: အ Moncada Barracks အပေါ် Assault
Rick ဂျိမ်း '' ထိပ်တန်းဆယ်ပါးအလုပ်ရှာဖွေရေးပျေါလှငျ
နယူးမက္ကစီကို Highlands သို့တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
လီယိုပတ်ထ VII: အဲဂုတ္တုနောက်ဆုံးဖါရောဘုရငျ
ရေခဲပြင်စကိတ်စီးခြင်းအပေါ် Spinning ကျွမ်းကျင်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဆန်းစစ်ခြင်း: Bridgestone Potenza RE970 ဝင်ရိုးစွန်းရာထူး AS